Japana: Ireny elo “vinyl” mahazatra ireny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2010 17:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, عربي, বাংলা, Español, русский, English
Zavatra mahafinaritra ny elo Japoney nentin-drazana na wagasa, vita amin'ny bararata sy taratasy Japoney. Saingy ny elo mahazatra indrindra, dia ity iray mora vidy, tantera-pahazavàna, vita amin'ny plastika sy “vinyl” (avy amin'ny mpandika: karazana plastika hafa ihany koa ny vinyl). Azo vidiana na aiza na aiza any amin'ireo kioska sy mpivarotra ena-madinika izy.
Mari ao amin'ny watashi to tokyo [Izaho sy Tokyo] dia manazava fa mahazatra ny maha-ambany dia ambany ny toe-tsaina miaro fananana.
Na fanahy iniana na tsia, ny fitoerana elo eo alohan'ny varavaran'ny mpivarotra enta-madinika dia toerana voalohany hanakalozana elo sy hangalarana azy. Mitantara tranga vao haingana ny mpaneho hevitra iray tao amin'ny blaogin'i Tagame :
Ni-tweet an-katezerana i @Yutarine, leo:
Olona maro no manao fahazarana ny mijery ny filazàna toetra'andro amin'ny maraina. Niteny i Lester Ho:
Tsy fantatro hoe tena azo antoka marina ve ireny tatitra ireny, fa zava-dehibe ny tsy fahatratraran'ny tampotampoka (sy kotsa!). Mety mamboraka ny sasany amin'ireo fahazaranao izany? Manontany tena ilay mpitoraka blaogy ao amin'ny Odeon Apple raha hikorompaka sy tsy hatoky ireo mpanjifa azy ireo mpivarotra elo “vinyl”, tsy toy ilay “tena izy”.
Misy mihitsy aza ny rindram-baiko amin'ny iPhone avy amina orinasa Japoney iray ka ny hany tanjony amin'izany dia ny hampahafantatra anao raha mila mitondra elo androany na tsia. Nanolotra izany ny blaogy Tokyo Hacker tao amin'ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Manao veloma ireo elo “vinyl” ” [ja].
Ny elo dia #1 ao amin'ny lisitry ny entana very nomena ny Biraon'ny Polisy An-tanan-dehibe. Tamin'ny 2006, elo teo amin'ny 430 000 no naterina, izay maherin'ny 20 isan-jaton'ireo fitaovana very rehetra.
Nanao ny famaritany manokana ny “fitaovana very” mihitsy aza ny Fikambanan'ny Lalam-by Japoney Tsy miankina ary misy fanononana ny elo ao amina rakibolan'ny teny mifandray amin'ny lalam-by.
Mikarakara tetik'asa mampiasa ireo elo voaangon'ireo orinasan-dalam-by isan-taona ny tanànan'ny Kanazawa. Ampanofaina maimaimpoana any amina toerana am-polony maro izy ireny, anisan'izany ireo toerana momba ny fizahan-tany sy ireo fiara fitaterana. Voamarika amin'ny sary famantaran'ilay mpihira Eri Takena, azo averina na aiza na aiza any amin'ireo toerana voatondro ireo izany. Nefa tsy mandositra ny fahazaran-dratsy. Maro tamin'ireo elo ireo no tsy niverina tamin'ny taon-dasa – toa maro ireo mpizaha tany no mitondra azy ireny mody hataony fahatsiarovana.